ओलीलाई भेट्न नेपालको आनाकानी किन ? – Karnalisandesh
ओलीलाई भेट्न नेपालको आनाकानी किन ?
प्रकाशित मितिः १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:३३ July 30, 2021
काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट गराएर १० बुँदे सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गराउन विघटित कार्यदलका सदस्य लागिपरेका छन्।
नेम्बाङले सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागिताका विषयमा प्रश्न गर्दा पनि नेपालले विभिन्न उपमा दिएर उत्तर दिएका थिए। ‘तपाईंले गठबन्धनमा छैन भन्नुभएको थियो। तर, पछिल्लो समय प्रतिनिधि गएको देखिन्छ। किन जानुभएको?’ नेम्बाङको प्रश्न थियो। नेपालले भने कथा हालेर जवाफ दिएको जनाइएको छ। पार्टी यो अवस्थामा आउनुमा लामो कारण रहेको उनको भनाइ थियो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ।